भाइरसले कसरी गर्छ आक्रमण ?- विविधा - कान्तिपुर समाचार
मानिसको जिन १ प्रतिशत परिमार्जन हुन १० लाख वर्षजति लाग्छ । तर, भाइरसका लागि यो एक दिनमै सम्भव छ ।
चैत्र ११, २०७६ प्रीति रेग्मी
आनुवंशिक सामग्रीको सानो टुक्रा (डीएनए वा आरएनए) घेर्ने प्रोटिन सेलको कणलाई भाइरस भनिन्छ । भाइरस जीवित कोशिकाको संसर्गबिना बाँच्न सक्दैन । किनभने यसमा आफ्नो संख्या बढाउन चाहिने ‘सेलुलर मेसिनरी’ हुँदैन । आफ्नो संख्या बढाउन भाइरसले अरू जीवमा प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
भाइरसलाई जीवित र निर्जीवबीचको सूक्ष्म कण पनि भनिन्छ । हाम्रो शरीरको कोशले नियमित रूपमा प्रोटिन बनाइरहेको हुन्छ । यही प्रोटिन बनाउने प्रक्रियाबाट भाइरसले आफूलाई चाहिने प्रोटिन लिन्छ र संख्या बढाउँदै लैजान्छ । भाइरसलाई आफ्नो संख्या बढाउन जीवित कोषहरूको सहायता चाहिन्छ । यस कारण यो सूक्ष्म जीवदेखि मानव प्रजाति सबैमा पस्छ । भाइरस यसरी प्रवेश गर्दा नै हामी संक्रमित हुन पुग्छौं ।
भाइरसले कुन बेला कुन जीवलाई संक्रमण गर्छ, त्यो यसको बनोट र आनुवंशिक प्रकृतिमा भर पर्छ । अहिले महामारीका रूपमा फैलिरहेको ‘सिभियर एक्युट रेस्पिरेटरी सिंड्रम ः कोभी–२’ (यही भाइरसबाट लाग्ने रोगलाई कोभिड–१९ भनिएको हो) र सन् २००३ मा चीनमा फैलिएको ‘सार्स कोभ’ बीच ८० प्रतिशत समानता देखिएको वैज्ञानिकहरूले पुष्टि गरेका छन् । २००३ मा ‘सार्स कोभ’ चमेरोबाट बिरालो अनि बिरालोबाट मानिसमा सरेको थियो ।
‘सार्स कोभ’ चमेरोमा पाइने र चमेरोको कोष प्रयोग गरेर आफ्नो संख्या बढाउने भाइरस हो । सायद यो भाइरसमा आएको आनुवंशिक परिवर्तनबाटै अहिलेको नोवल कोरोना बनेको हो । ‘सार्स कोभ’ ले एकाएक आफ्नो आनुवंशिक सामग्रीमा यस्तरी परिवर्तन ल्याएछ, यो मानव कोष चिर्न र आफ्नो संख्या बढाउँदै लैजान सक्ने भयो । यही संख्या बढाउनु नै भाइरसको महामारीको कारण हो । ‘कोभी–२’ भाइरस भर्खर नयाँ होइन । यो पहिल्यै रहिआएको भाइरसको जिनमा आएको परिमार्जनको उपज हो ।
भाइरसमा यस्तो परिमार्जन कुन बेला, कुन प्राणीलाई, कुन समयमा हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ विज्ञानसँग पनि छैन । विज्ञानले भन्छ— मानिसको जिन १ प्रतिशत परिमार्जन हुन १० लाख वर्षजति लाग्छ । तर, भाइरसका लागि यो एक दिनमै सम्भव छ । त्यसो हुँदा कुनै जनावरमा मात्र आक्रमण गर्न सक्ने भाइरस आफूलाई एक दिनमै परिमार्जन गरेर मानिसलाई आक्रमण गर्ने बन्न सक्छ ।
अहिले यो महामारी रोक्ने विधि खोज्न विज्ञान लागिपरेको छ । विज्ञानले जे पनि गर्न सक्छ भन्ने युगमा एउटा सानो भाइरस तह लगाउन ठूला वैज्ञानिकहरूलाई नै हम्मेहम्मे परेको छ । विज्ञानले काम गर्ने आनुवंशिक डाटाबेसबाट हो । कुनै पनि जीवको जिन अध्ययनपछि मात्र त्यसविरुद्ध औषधि वा खोप बनाउन सकिन्छ । यो भाइरसको आनुवंशिक जानकारी २०२० जनवरीमै पत्ता लागेको हो । सुन्नमा आएअनुसार यो भाइरसविरुद्धको खोपको परीक्षण हुँदै छ ।
नेपालमा यो भाइरसले महामारीकै रूप लिएको छैन । तर, अहिलेकै अवस्थाले पनि हामीले विज्ञान र प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको कटु सत्य उजागर गरिदिएको छ । विश्व नयाँ भाइरस बनाउन सक्ने अवस्थामा पुगिसकेका बेला हामी भने भाइरस परीक्षणका लागि समेत विदेशीकै भर पर्ने हालतमा छौं । कोरोना महामारीले वैज्ञानिक अध्ययन–अनुसन्धानमा हामी धेरै अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको औंल्याएको छ ।
रेग्मी जैविक प्रविधि केन्द्रीय विभाग, त्रिविकी उपप्राध्यापक हुन् ।
प्रकाशित : चैत्र ११, २०७६ १५:२३
संक्रमणपछि अपनाउनुपर्ने सतर्कता
चैत्र ११, २०७६ सम्पादकीय
मुलुकमा अर्को एक व्यक्ति पनि कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट संक्रमित भएको आइतबार पुष्टि भएसँगै प्रकोप फैलन नदिन थप सतर्कता अपनाउनुपर्ने देखिएको छ । फ्रान्सबाट कतार हुँदै आएकी ती युवती शंका लागेपछि अस्पताल पुगेकी थिइन् ।
त्यस क्रममा ‘स्वाब’ परीक्षण गर्दा कोरोनाको संक्रमण पाइएको हो । यस्तो अवस्थामा अब सरकारले प्राथमिकताका साथ ती युवतीको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरू पहिचान गरी उनीहरूलाई पनि निगरानीमा राखी परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । र, कसैलाई संक्रमण पाइएमा उचित उपचारको बन्दोबस्त मिलाउनुपर्छ ।
ती युवती नेपाल आएको विमानमा को–को थिए ? विमानस्थलमा ओर्लिएपछि उनी त्यहाँ कस–कसको संसर्गमा रहिन् र त्यतिबेला अध्यागमन प्रक्रियामा संलग्न अधिकारीहरू को–को थिए ? त्यहाँबाट घर आउँदा चढेको गाडीका चालक को थिए, साथमा अरू थिए कि थिएनन् ? र, यसबीचमा उनले घरमा परिवारका सदस्य र अन्य कस–कसलाई भेटिन् ? सरकारले यी सबै व्यक्तिको खोजबिन गरी उनीहरूलाई निगरानीमा राख्नुपर्छ । परिवारका सदस्य र उनलाई भेटेका जति सबैले अविलम्ब आफूलाई अरूबाट अलग्गै राखी कुनै लक्षण देखिएमा परीक्षण गराउनुपर्छ । सरकारले उनीबाट संक्रमण सरेको हुन सक्ने व्यक्ति जति छिटो पहिचान गरेर ‘क्वारेन्टाइन’मा बस्न लगाउने र संक्रमित पाइए उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउँछ, यो प्रकोप फैलिने जोखिम पनि त्यति नै कम हुन्छ ।
यो प्रकोप फैलिएको झन्डै चार महिना भइसक्दा पनि यसअघि नेपालमा संक्रमणको एकमात्र घटना पाइएको थियो । संक्रमण फैलिन सुरु भएको चीनको वुहानबाट फर्किएका ती युवा उपचारपछि निको भएर माघ पहिलो साता नै घर फर्किसकेका थिए । यसबीचमा संक्रमणका अन्य घटना नदेखिँदा नेपालको रोकथामको तयारी मन्द थियो भने परीक्षण पनि तुलनात्मक रूपमा निकै कम भएका थिए/छन् । अब भने यो विषयलाई नयाँ दृष्टिकोणबाट हेर्ने र त्यसैअनुसार व्यवहार गर्नुपर्ने देखिन्छ । पछिल्लो चरणमा संक्रमणबाट प्रभावित अन्य मुलुकमा देखिएका र नेपालमै पाइएका दुइटा घटनाबाट के प्रमाणित हुन्छ भने तीव्र रूपमा संक्रमण फैलिएका देशहरूबाट स्वदेश फर्किएकाहरूले यो रोग भित्र्याइरहेका छन् । भारतलगायतका मुलुकमा उनीहरूबाट सरेर स्थानीय व्यक्ति पनि संक्रमित भएका धेरै घटना देखिइसकेका छन् । नेपालमा पनि स्थानीय व्यक्तिहरूमा यसको संक्रमण नफैलिएको होला भन्न सकिँदैन । त्यसैले, जोखिमपूर्ण यात्रा गरेका र उनीहरूको सम्पर्कमा आएका जति सबै व्यक्तिले आफूलाई घरमै अलग्गै राखेर केही लक्षण देखिएमा अनिवार्य परीक्षण गराउनुपर्छ ।
विमानस्थल हुँदै तेस्रो मुलुकबाट आएकाहरू मात्र होइन, नेपालले विशेष ध्यान भारततर्फबाट भित्रिएकाहरूमा पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ । पछिल्ला दिनहरूमा भारतसितका मुख्य नाकाहरूबाट दिनकै दसौं हजार नागरिक व्यवस्थित परीक्षणबिनै स्वदेश आएका छन् । दुई सातायता मात्रै भारतबाट झन्डै ६ लाख मानिस भित्रिएको जनाइएको छ । सीमाबाट भित्रिनेहरूको संख्या यति बाक्लो देखिन्थ्यो कि, तीमध्ये कसैलाई संक्रमण भएको रहेछ भने सजिलै अरूलाई सर्न सक्ने अवस्था थियो । त्यसैले उनीहरूबाट संक्रमण नफैलियोस् भनेर विचार पुर्‍याउन पनि उत्तिकै आवश्यक छ । उनीहरू सबैलाई सरकारले अनिवार्य रूपमा दुई साता घरमै क्वारेन्टाइनमा बस्न भनेको छ । सरकारको यो अनुरोधलाई अनुशासित भएर पालना गरी उनीहरूले रोगका कुनै लक्षण देखिएमा परीक्षण गराउनुपर्छ । आफ्नो परिवार र समुदायलाई संक्रमणको जेखिमबाट जोगाउनु उनीहरूको ठूलो दायित्व हो ।
गृह मन्त्रालयले शनिबार ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई भारतबाट विभिन्न नाका हुँदै नेपाल भित्रिएका नागरिकको संक्षिप्त परिचय, जान लागेको जिल्ला, स्थानीय तह र वडाको समेत विवरण संकलन गरेर क्वारेन्टाइनमा बसे–नबसेको अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन धेरै पहिले नै दिनुपर्थ्यो । नाकाहरूमा पनि धेरैवटा स्वास्थ्य जाँच डेस्क राख्नुपर्थ्यो र उनीहरूको ठेगाना, फोन नम्बरलगायत आवश्यक विवरण टिप्नुपर्थ्यो । ढिलै भए पनि मन्त्रालयको निर्देशन सकारात्मक छ । सम्बन्धित सबै निकायले यसको गम्भीरतापूर्वक पालना गरी जोखिमको सम्भावना न्यून गर्न भूमिका खेल्नुपर्छ ।
खासगरी, सम्बन्धित पालिका र वडाहरूको यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन सक्छ । राजनीतिक दलका स्थानीय कार्यकर्ताहरूले पनि रचनात्मक योगदान पुर्‍याउन सक्छन् । उनीहरू सबै मिलेर आफ्नो वडा तथा गाउँ–ठाउँमा विदेशबाट आएका व्यक्तिको अभिलेख राखी क्वारेन्टाइनमा बसे–नबसेको अनुगमन गर्न सक्छन् । किनभने, यति बेला सरकारी संयन्त्र र नागरिकले सबैले ध्यान दिनुपर्ने विषय एउटै छ– विदेशबाट फर्किएकालाई दुई सातासम्म अन्य व्यक्तिको सम्पर्कमा जान जति रोक्न सकिन्छ, संक्रमण फैलने सम्भावना त्यति कम हुन्छ । यसका लागि स्थानीय समुदाय र नागरिक तहले समेत सरकारी संयन्त्रलाई सक्नेसम्मको सहयोग पुर्‍याउनुपर्छ ।
प्रकाशित : चैत्र ११, २०७६ १५:२१